UNFC နှင့် ကချင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့တို့ ထိုးစစ်ရပ်ရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > UNFC နှင့် ကချင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့တို့ ထိုးစစ်ရပ်ရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
UNFC နှင့် ကချင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့တို့ ထိုးစစ်ရပ်ရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၀၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၃၂ မိနစ်	ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ အစိုးရ တပ်များ၏ ထိုးစစ်များ လုံးဝ ရပ်တန့်ပေးရန် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကချင်အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့မှ ပူးတွဲ၍လည်းကောင်း၊ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အသီးသီး ကြေငြာချက်များ ထုတ်ပြန်ကာ တောင်းဆို လိုက်သည်။ကချင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့မှ ပူးတွဲ၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေငြာချက်တွင် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA ကိုလေကြောင်းမှ လေယာဉ်များဖြင့် အသုံးပြု တိုက်ခိုက်နေမှုများနှင့် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ကချင်-တရုတ် နယ်စပ် တလျှောက်ရှိ ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းများဘက်သို့ ပစ်ခတ်နေမှုများကို ချက်ခြင်း ရပ်တန့်ပေးရန်နှင့် စစ်ရေးအရ ဖိအားပေးမှုများ ဖယ်ရှားကာ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် အပါအဝင် အချက် လေးချက်ကို တောင်းဆို ထုတ်ပြန်ထားသည်။စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ၏ ဘဝ လုံခြုံရေးအတွက် ဆိုးရွားသည့် အခြေအနေများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်း နိုင်လိမ့်မည်ဟု သုံးကပ်ကာ ယခုကဲ့သို့ ကချင် အဖွဲ့များ စုပေါင်း၍ ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ရာတွင်ပါဝင်သည့် ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မမွန်းနေလီက ပြောသည်။“အဓိက ကတော့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံရေး အခြေအနေတွေဟာ ပိုပြီး စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာနေတယ်၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို ထိုးစစ် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် လုပ်နေတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အတားအဆီးတွေ ဖြစ်စေတယ်” ဟု မမွန်းနေလီမှ မဇ္ဈိမအား ပြောသည်။ကချင်-တရုတ် နယ်စပ် တလျှောက် KIO ထိန်းချုပ် နယ်မြေအတွင်း၌ လဂျားယန် ဒေသ၌ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂၅,၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်၊ လိုင်ဇာမြို့၌ ၂၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်နှင့် ရှမ်းမြောက်ပိုင်းရှိ ကွတ်ခိုင် မြို့ပေါ်၌ ဒုက္ခသည် အသစ် အနည်းဆုံး (၅၀၀) ဦးခန့် ဒုက္ခသည် စခန်း များ၌ အသီးသီး ခိုလှုံ နေကြရ သည်ဟု မမွန်းနေလီမှ ပြောသည်။ဒုက္ခသည် များမှာ စောင်၊ အနွေးထည်၊ စားနပ် ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးများ မလုံလောက်သည့် ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေပြီး ယာယီ ရွက်ဖျင်တဲများဖြင့်သာ နေထိုင်နေကြရသဖြင့် ကိုယ်ခံအားနည်းသည့် သက်ကြီး ရွယ်အိုများနှင့် ကလေး သူငယ်များမှာ အအေးဒဏ်မှတဆင့် ရရှိသည့် ရောဂါမျာ ခံရစား နေရသည်ဟု ဆိုသည်။ပြင်းထန်စွာ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် နေမှုများ ရှိသော်လည်း နှစ်ဖက် အကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း မမွန်းနေလီက ပြောသည်။“ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ် ဆိုတာက ယုံကြည်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမှသာ ဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်ဖို့ ဖြစ်တယ်၊ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တိုင်းလဲ အောင်မြင် တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး၊ ထိုးစစ်တွေ အပြင်းအထန် လုပ်နေ ခြင်းဟာလည်း အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတဲ့ ယုံကြည်မှု တွေကို ပျက်ပြားအောင် လုပ်ဆောင် နေသလို ဖြစ်နေတယ်၊ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုကိုတော့ မျှော်လင့် ပါတယ်” ဟု မမွန်းနေလီမှ မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ထို့အတူ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်သား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေငြာချက် တွင်လည်း မှားယွင်းပြီး တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးယုတ် စေသည့် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် နေမှု များအား အလျင် အမြန် ရပ်တန့်ပေးရန် တောင်းဆို ထုတ်ပြန် ထားသည်။“တိုင်းရင်းသား ပြသနာများကို လက်နက် အားကိုးပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြေရှင်းခဲ့သော်လည်း မပြေလည်နိုင်ရုံမျှမက တိုင်းပြည် ခေတ်နောက်ကျ ပြည်သူများ ဒုက္ခ ရောက်နေရသည်ကို သင်ခန်းစာ မယူပဲ စစ်ရေး နည်းဖြင့် ဆက်လက် ဖြေရှင်းခြင်းသည် အလွန် မိုက်မဲသော လုပ်ရပ် ဖြစ်သည်” ဟု ကြေငြာချက်၌ ဖော်ပြ ပါရှိသည်။အကယ်၍ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် နေမှုများ မရပ်တံ့ဘဲ ဆက်လက် တိုက်ခိုက် နေပါက နောင်ဖြစ် လာမည့် ဆိုးကျိုး အားလုံးသည် အာဏာရ အစိုးရနှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော် တာဝန်ပင် ဖြစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ကြေငြာချက်၌ထောက်ပြ ပြောဆိုထားသည်။အောက်တိုဘာလ (၂၀) ရက်နေ့၌ ဦးအောင်မင်းနှင့် ကချင် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံစဉ်၌ လည်းကောင်း၊နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က UNFC ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်၌ လည်းကောင်း နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းရန် သဘောတူညီမှု ရရှိထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။“တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့စည်း တရပ်ရပ် လူမျိုး တမျိုးမျိုးအား ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် နေခြင်းသည် မိမိတို့ အားလုံးကို ချေမှုန်းရန် ဦးတည် နေကြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာ နားလည် ကြပါသည်” ဟုလည်း ကြေငြာချက်၌ဖော်ပြ ပါရှိ ထားပါသည်။UNFC ဘက်မှလည်း ရရှိ ထားပြီး ဖြစ်သော နိုင်ငံရေး ပြသနာကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်း အရ တွေ့ဆုံ ဖြေရှင်းရေး သဘော တူညီမှုကို ပျက်ပြား မသွားစေလို၍ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင် နေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်၌ သဘောထား ပြု၍ ရေးသား ထားပါသည်။
UNFC နှင့် အစိုးရ ပြန်တွေ့ရန် ရွှေ့ဆိုင်းထား	ငြိမ်းချမ်းရေးထပ်မံတွေဆုံမှု UNFC ၊ UWSA နှင့် မိုင်းလာ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်မည်	အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့နှင့် UNFC တို့ နိုင်ငံရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် သဘောတူ	သမ္မတ၏ “စားပွဲဝိုင်းတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း” နည်းလမ်း KIO ကြိုဆို ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရန် ထပ်မံတွေ့ဆုံမည်	စစ်ရှိန်လျော့ရန်နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် နှစ်ဖက်သဘောတူ	ကချင်စစ်ပွဲကြောင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု နှောင့်နှေး	Who is Online
We have 128 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved